ट्रमा सेन्टरको मुहार फेर्यो एचआरले Nepalpatra ट्रमा सेन्टरको मुहार फेर्यो एचआरले
ट्रमा सेन्टरको मुहार फेर्यो एचआरले
काठमाडौँ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार गर्न आउने बिरामी बढेका छन् । दुई महिनाअघि यस अस्पतालको बहिरङ्ग सेवामा उपचार गर्न आउने बिरामी दैनिक २०० थिए । अहिले उक्त सङ्ख्या १०० ले बढेर ३०० पुगेको छ ।
संस्थाको चाहनाअनुरूप अस्पताल व्यवस्थापन पक्षले पनि सहयोग दिँदै आएका कारण काम गर्न सहज हुनुका साथै अस्पताल सफा र बिरामीको आकर्षण बनेको निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले बताए ।
सरकारी अस्पताल सधै फोहर मात्र हुन्छ र त्यहाँ गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने भनाइ अहिले यहाँ लागू हुँदैन । नेपाल सरकारले तोकेअनुसारको अस्पतालबाट निस्किने फोहर व्यवस्थापन गर्नका लागि इनोभेटिभ एचआर सोलुशन प्रालि अहिले यस अस्पतालसँग जोडिएको छ ।
एचआर आएसँगै अहिले सरसफाइको क्षेत्रमा अस्पतालले मुहार फेरेको छ । एचआरले यसअघि पनि अस्पताल, होटेल र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सरसफाइको जिम्मा पूरा गरिसकेको छ ।
“त्यतिबेला दुई साताअघि १० प्रतिशत रहेको सङ्क्रमणदर बढेर ५० प्रतिशत पुगेको थियो भने दैनिक २८ मा रहेको मृत्युको आँकडा ८८ हुँदै २०० नाघिसकेको थियो, यस्तो जटिल परिस्थितिमा विशेष अस्पतालका रूपमा उपचार गर्नु सहज भने पक्कै थिएन”, निर्देशक डा. पौडेलले भने ।
त्यहाँ उपचार गराइरहेका चोटपटकका बिरामीलाई सार्ने ठाउँको समस्या थियो । त्यहाँ शल्यक्रिया गर्न ठिक्क परेका र बहिरङ्ग विभाग (ओपीडी) मा समेत धेरै बिरामीलाई व्यवस्थापन गरी कोरोनाका बिरामीलाई सेवा दिनु मुख्य चुनौतीको सामना गर्दै यसले सेवा विस्तार गरेको हो ।
भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा आकस्मिक उपचार केन्द्र (ट्रमा सेन्टर) निर्माण गरिएको हो । चोटपटकबाट मृत्युको मुखमा पुगेका घाइतेहरूलाई जीवन दिने ठाउँका रूपमा यस सेन्टरको स्थापना भएको हो ।
घरबाट निस्किने फोहरभन्दा अस्पतालबाट निस्किने फोहर व्यवस्थापन कार्य आफैँमा चुनौतीको विषय हो । व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अस्पतालका फोहरबाट पनि उत्तिकै सङ्क्रमणको जोखिम हुने गर्दछ ।
सङ्क्रमणजन्य फोहरलाई व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यसलाई निःसङ्क्रमणको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्र व्यवस्थापनको काम हुन्छ । यन्त्रको प्रयोग गरी सङ्क्रमणजन्य फोहरलाई निःसङ्क्रमण गरेर मात्र सामान्य फोहर जसरी व्यवस्थपन गरिन्छ ।
सरसफाइको क्षेत्रमा २० वर्षे अनुभव भएको बताउने न्यौपालेले अन्य क्षेत्रको व्यवस्थापनभन्दा जटिल काम अस्पतालबाट निस्किने फोहर व्यवस्थापनको रहेको बताए । अस्पतालको मुख्य स्थान आईसीयु, भेन्टिलेटर, शल्यक्रिया कक्ष जस्ता स्थान सरसफाइको हिसाबले बढी जोखिम र सबै समयमा सफा नै रहनुपर्ने स्थान भएको प्रमुख न्यौपानेको भनाइ छ ।
#राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर